किन तपाइँ २०१ Your मा तपाइँको भिडियो मार्केटिंग रणनीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ Martech Zone
भिडियोहरूले यसलाई अब प्रत्येक इन्टरएक्शनमा बनाउँदैछ जुन हामी अनलाइन बनाउँदैछौं। सँग ट्विटरमा प्रत्यक्ष भिडियो फिडको सुरुवातबाट Meerkat, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा भिडियोको निरन्तर लोकप्रियता, र प्रत्येक मोबाइल उपकरणमा उच्च परिभाषा भिडियो को पहुँच। वास्तवमा, सबै भिडियो ट्राफिकको आधा अब एक मोबाइल फोन वा ट्याब्लेटमा रुट गरिएको छ - त्यो अविश्वसनीय बृद्धि हो।
र यो केवल यो होइन कि भिडियोहरू लोकप्रिय वा उपभोक्ताद्वारा चालित छन्। 80०% भन्दा बढि वरिष्ठ अधिकारीहरु अधिक भिडियो हेर्नुहोस् उनीहरूले एक बर्ष भन्दा पहिले र तीन क्वाटर गरे कार्यकारीहरूले कार्य-सम्बन्धित भिडियोहरू हेरिरहेका छन् हरेक हप्ता! र छनौट दिइएको छ, 59%% कार्यकारीहरू बरु एक भिडियो हेर्न चाहन्छु लेख पढ्न भन्दा। त्यसोभए तपाईं एक B2C वा B2B कम्पनी हुनुहुन्छ, भिडियो तपाईंको डिजिटल मार्केटिंग रणनीतिमा आवश्यक हुँदैछ।
भिडियोहरू भएमा खुला दरहरू बढ्छ, क्लिक-थ्रू दरहरू बढ्छ, र ईमेल मार्केटिंगमा सदस्यता रद्द हुने दरहरू कम गर्दछ। भिडियोहरू ब्रान्ड सचेतना, नेतृत्व उत्पादन र अनलाइन सगाईको लागि मार्केटरहरूद्वारा प्रभावकारी फेला परेका छन्। भिडियो मार्केटिंग यति लोकप्रिय र प्रभावी हुँदैछ कि हाईक्युले पहिले नै नामाकरण गरिसकेको छ २०१ Video भिडियो मार्केटिंगको वर्ष!
HighQ को बारेमा
HighQ सहयोग, प्रकाशन, डाटा कोठा र उद्यमको लागि लगन समाधानको प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ।
टैग: एनिमेटेड भिडियोव्याख्याकर्ता भिडियोमार्केटिंग भिडियोभिडियो एनिमेसनभिडियो मार्केटिंगभिडियो पहुँचWyzowl
नोभेम्बर,, २०१ at 7::2014 बिहान
आश्चर्यजनक जानकारी ग्राफिक यो भिडियो मार्केटिंगको प्रभावकारिता बुझ्नको लागि हो र प्रत्येक चीज राम्रा र सजीलो वर्णन गरिएको छ। त्यसकारण म निश्चित छु कि यस जानकारीलाई सूचित गरेर ग्राफिक सबैले बुझ्नेछन् कि भिडियो मार्केटिंग किन व्यवसायको लागि महत्वपूर्ण छ र किन भिडियो मार्केटि day दिनदिनै बृद्धि भइरहेको छ। त्यसैले डग्लस यस्तो मनमोहक जानकारी ग्राफिक प्रस्तुत गर्न को लागी धन्यवाद छ र आशा छ कि यस प्रकारको उपयोगी जानकारी ग्राफिक प्राय: देखीन्छ :)
डिसे 18, 2014 मा 9: 44 AM
जानकारी ग्राफिक्स को साथ तपाइँको जानकारी को साझा करने को लागी शानदार तरीका।
मार्क्स 22, 2015 मा 4: 21 PM
म मेरो पाठकहरूको लागि भिडियो ल्याउन सुरू गर्ने योजना गर्दैछु। म परिणामहरु को बारे मा भ्रमित थियो, तर कसलाई थाहा छ। मैले प्रयास गर्नु पर्छ! यो इन्फोग्राफिक्स धेरै प्रभावी छ।